ဝါးခယ်မ : ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ တပေါင်းလပြည်. ၀ါးခယ်မ ခရီး
၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ တပေါင်းလပြည်. ၀ါးခယ်မ ခရီး
ပညာ ကျန်းမာ သာယာ ဟူသော မူလဆောင်ပုဒ်များဖြင်. ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကပင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) အနေဖြင်. မိမိတို.ဇာတိမြို. အတွက်တတ်နိုင်သည်.ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြိုးစား ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိကြပါသည် ။
တပေါင်းလပြည်.ခရီးစဉ်အနေဖြင်. ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ၏ အမှုဆောင်များ ၊ အသင်းသူ/သားများသည် ၂၀၁၆ မတ်လ ရက်နေ.နေ.လည်က ရန်ကုန်မြို.မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည် ။ ယင်းနေ.ညနေတွင် ၀ါးခယ်မမြို. သကျမဟာသီရိ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်း မဟာပုညတန်ဆောင်းတွင် ခင်းကျင်းပြသထားသော ဗုဒ၀င် ပြပွဲအား ကြည်.ရှုလေ.လာကြပြီးနောက် ဧည်.သည်တော် မှတ်တမ်းတွင် အမှတ်တရ ရေးသားကြပါသည် ။
ထို.နောက်ညပိုင်းတွင်ဝါးခယ်မမြို. ရှိ မြို.နယ်အသင်း ရုံးခွဲတွင် စည်ပင်တာဝန်ရှိသူများ ၊ မြို.နယ် ဖွံ.ထောက်အဖွဲ.၀င်များ ၊ ပညာရှင်များ နှင်.တွေ.ဆုံလျှက် ၀ါးခယ်မမြို.အလယ် မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော ( ယခုအခါ ခန်းခြောက်လုနီးပါးဖြစ်နေသည်. ) ဈေးချောင်း အား မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် နှင်. ဖြစ်နိုင်သမျှပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စည်းဝေးတိုင်ပင်မှု တစ်ခုပြု လုပ်ခဲ့ကြပါသည် ။
ထို.နောက် ၂၀၁၆ မတ်လ ၂၃ရက်နေ. ( တပေါင်းလပြည်.နေ. ) မနက်အာရုဏ်တက်တွင် ၀ါးခယ်မမြို. သကျမဟာသီရိ ဘုရားကြီး အား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ဆက်ကပ်လှုဒါန်းပွဲသို.စုံညီတက်ရောက်ကြပြီး ၀ါးခယ်မဦးရဲမောင် စီစဉ်သော ဇာတိဖွားအနုပညာရှင်များ၏ မင်္ဂလာတေးသံသာများဖြင်. ဖျော်ဖြေခြင်း အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည် ။ ထို.နောက် အနေကဇာတင်ခြင်း အခမ်းအနားဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပင်.သံဃာ ၉၉ ပါးမှ လှုဖွယ်ဝတ္ထုများ ဆက်ကပ်လှုဒါန်းကာ သံတန်ဆောင်းတော်အတွင်း တရားနာ ၊ ရေစက်ချအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။
ထိုနေ.မနက် ၈နာရီတွင် ၀ါးခယ်မမြို.နယ် ကလကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတို.ချဲ့ဆောင် စတင်တည်ဆောက်မှု အခမ်းအနားကို အဆိုပါကျောင်းမြေနေရာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။
မည်သည်.အပိုအစီအစဉ်တစ်ခုမှမပါပဲ တက်ရောက်လာသူအားလုံး Foundation Line စတင်တူးဖော်ပြီး ကျောင်းတည်ဆောက်မှုအခမ်းအနား စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ထိုအခမ်းအနားသို.၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) အမှုဆောင်များ ၊ မြေအလှုရှင် ၊ ကျောင်းတည်ဆောက်မှုအလှုရှင် ၊ ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများ ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ၊ ဆရာမများတက်ရောက်ပြီး သတ်မှတ်အချိန်တွင် ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်းဥက္က၏ နှင်.အမှုဆောင်များက Foundation Line များစတင်တူးဖော်ပေးပြီးနောက် ကျေးရွာသူ/သားများက တက်ကြွ ညီညွတ်စွာ မြေပြင်လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ထိုကျောင်းဆောင်အတွက်မြေနေရာကို အလှုရှင် ဦးချွတ်ကလိန် ကလှုဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မူလရှိပြီးသားကျောင်းမြေနေရာမှာလည်း အဆိုပါအလှုရှင်ကပင် လှုဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျောင်းအလှုရှင်မှာ မူလ သော်ကတံတားကြီးကျောင်း အလှုရှင် 100 School Pr0ject မှပင်ဖြစ်ပြီး ယခုတည်ဆောက်လှု ဒါန်းမည်. ပေ ၈၀ × ပေ ၃၀ RC Building ကို စာသင်ခုံများ နှင်.အတွင်းပစ္စည်းများအပါ တည်ဆောက်ချိန် ၂လခန်.အတွင်း သိန်း၃၅၀ ခန်. အသုံးပြုတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
နေ.လည်ပိုင်းတွင်ဝါးခယ်မမြို.နယ် သာယာကုန်းကျေးရွာ ရှိရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဥမ္မာဒန္တီ စေတီ တော်ကြီး၏ အရံစေတီတော်များထီးများတင်လှု ပွဲ နှင်. ရေစက်ချ တရားနာ အလှုကို ၂၀၁၆ မတ်လ ၂၃ ရက် နေ.( တပေါင်းလပြည့်နေ. ) နေ.လည်က အဆိုပါ သာယာကုန်းကျေးရွာလေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည် ။
ထိုအခမ်းအနားသို. တက်ရောက်ရန်ဝါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) အမှုဆောင်များ ၊ မြို.သူ/မြို.သားများ က ထိုနေ.မနက် ၉နာရီအချိန်တွင် နှစ်ထပ်သင်္ဘောဖြင်. သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည် ။
သင်္ဂဟမေတ္တာ အဖွဲ.၏ လှုဒါန်းမှုဖြင်. ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားသော ဆိပ်ခံတံတားဝယ် ကျေးရွာသူ/သားများ က ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြပြီးနောက် စေတီတော်မြတ်ကြီးဆီသွားရောက်ကြပါသည် .။ ရောက်ရှိပြီးသည်နှင်. ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်းအမှုဆောင်များမှ အရံစေတီတော်များ၏ ထီးတော်များတင်လျုကြပြီးနောက် သံဃာတော်များမှ ဘုရားအနေကဇာတင်ကြပါသည် ။ ထို.နောက် ၀ါးခယ်မရဲမောင်ဦးစီးသော ဇာတိဖွား ဂိတပညာရှင်များက သိဆိုဖျော်ဖြေကြပြီး ပရိသတ်များကိုနေ.လည်စာလှုဒါန်းကြပါသည် ။ ထို.နောက် ရေစက်ချတရားတော်နာအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ကြပြီး သက်ကြီးသံဃာတော်တစ်ပါးအား အလှုငွေ တစ်သိန်းကျပ် လှုဒါန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းဖြိုးကာ အခမ်းအနား အစီအစဉ်များ အပြီးသတ်ခဲ့ပါသည် ။
ယင်းနေ.ညနေပိုင်းတွင် မြို.နယ် အသင်းအမှုဆောင်များ စုပေါင်း၍ ကျုံမငေးမြတ်စွယ်တော်သို.သွားရောက်ဖူးမြှော်ကြရင်း ဈေးကျောင်းဆရာ တော် ထံဝင်ရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ကြပါသည် ။
၂၀၁၆ မတ်လ ၂၄ရက် နေ.မနက်ပိုင်းတွင်မူ အားမာန်သစ် မသန်စွမ်းအဖွဲ.နှင်. တွေ.ဆုံလျှက် အသင်း၏ လက်ရှိအခြေအနေ ၊ ကူညီပံ.ပိုးရန် လိုအပ်သည်များ ၊ လက်ရှိကူညီပေးထားသော ကွန်ပြူတာ သင်းတန်းတွင်တက်ရောက်နေသော အသင်းဝင်များအခြေအနေ ၊ လိုအပ်နေသော မသန်စွမ်းအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စ များကို ရင်းနှီးပွင်.လင်းစွာ ဆွေးနွေးပြီးနောက် နေ.လည်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မြို.သို.ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါသည် ။
100 Schools Project မိတ်ဆက်
Study to 100 Schools Project & Scholarship Program ဓါတ်ပုံများ
မုက္ခ၀တီ မြို.ဟောင်း ဓါတ်ပုံများ
ပြည်လုံးချမ်းသာဆုတောင်းပြည်. သော်က စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်း
လေ.လာမိသမျှ ၀ါးခယ်မ သမိုင်းကြောင်း အချို.
သကျမဟာသီရိမြတ်စွာဘုရားကြီး လပြည်.မနက်ရေကြည်တော်ကပ် ဓါတ်ပုံများ
ကြခတ်ကုန်း ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း တည်ဆောက်မှု စတင်ခြင်း မှတ်တမ်း
သာယာကုန်းကျေးရွာ ဥမ္မာဒန္တီ စေတီ အရံစေတီထီးများတင်လှု ပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 5:07 PM
၂၀၁၆ ရန်ကုန်သင်္ကြန် စီမံခန်.ခွဲမှု အပေါ်သူ.အမြင်
Political Cartoon for 2016 ( လျှပ်စစ် )
၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ တပေါင်းလပြည်. ၀...